Umhlaba wokwakha | Ecobricks.org
Ecobricks, amabhodlela, kanye nokwakhiwa komhlaba
Ukwakha nomhlaba kanye nokuhleleka kulula, kungabizi futhi kumnandi. Nge-ecobricks eyanele, ungakha noma yini kusuka ebhentshini elula engadini kuya ekhaya usebenzisa izinto zakho ezisekudleni ezitholakala endaweni yangakini. “I-Cob” yindlela yokwakha yasendulo yemvelo etholakala emhlabeni jikelele ngezindlela ezahlukene: i-adobe, i-wattle ne-daub, njll. Seye isetshenziselwa ukwakha konke kusuka ezindlini, kuya emathempelini enqabeni-abaningi babo abakhuthazele amakhulu eminyaka. I-Cob ayikwenzeli kuphela izakhiwo ezinhle nezisebenza kahle, kodwa isebenza ngokuhle nge-ecobricks namabhodlela. Sisebenze kanzima ukuthuthukisa inqubo elula yomhlaba kanye ne-ecobrick ukuze abantu abadala nabafundi bakwazi ukwenza lo msebenzi basebenzise izinsiza zemvelo zendawo. Landela izinyathelo ezingezansi. Chofoza ukuze wande.
Izinhlelo ezilula zomhlaba kanye ne-ecobrick zingama-benches, izingadi kanye nezinkundla zokudlala. Lena yindlela enhle yokuqalisa nge-non-structural, ingozi engozini! Le nqubo ingasetshenziswa ngokuqinisekile ukwenza izindonga nemakhaya- njengoba nje esikhathini esidlule kwakusetshenziselwa ukuba ithempeli nezinqaba. Isicelo esilula ukubeka ama-Ecobricks ngokuzenzekelayo emgodini we-cob. Umphumela uba ukwakha okuqinile, okuqinile. Umcengezi wommbila kumele uhlanganise yonke i-ecobrick ukuyivikela ekhanyeni elanga le-UV (ngaphandle kokukhetha okukhethwa kukho kwendawo yekhanda kanye nebala eliphansi le-Ecobrick). Ngakho ivikelwe emisebeni ye-UV kanye nezakhi izitini zizohlala ziningi kakhulu kuze kube phakade. Chofoza ukwandisa izinyathelo ezingezansi ukwakha ibhentshi lomhlaba elilula ne-ecobrick.
Yini engcono yokwakha?
Sincoma ukuthi uqale amancane ngokwakhiwa kwakho kokuqala kwe-ecobrick. Izingadi zilungile! Ngokwenza njalo, ungabeka ukusebenzisa i-ecobricks, kuhilela wonke umuntu ekwakheni, ukunciphisa izindleko (akukho sidingo sabanjiniyela) futhi ufunde izimiso eziyisisekelo zomhlaba kanye nokwakhiwa kwe-ecobrick ngokusebenzisa isipiliyoni.
Iqiniso liwukuthi, i-Ecobricks yenza izingadi ezinhle lapho singahlala khona, sidlale futhi sidle. Sibabiza ngokuthi i-Food Forest Play Parks. Njengoba sinikezwe ukuthi iningi lepulasitiki esiyifinyelela ngaphakathi kwe-ecobricks livela ekufakweni kokudla, izitidi zokwakha ezikhulayo ukudla okungapheli, kuhle kakhulu! Lesi sikhala sidalwe ngokugubha imigqa yamabhodlela ebekwe ngokuzungezile. Izindonga ezincane eziholela, zenze amabhentshi amakhulu kanye nezindonga zokulala zensimu. Oh … futhi ungagijima futhi udlale ithegi nabo!
Amapaki e-Forest Forest Play afanelekile ezikoleni. Ukufundisa izingane ukuba zithuthukise ukudla kwazo yikhono eliyigugu kakhulu esingalinika isizukulwane esilandelayo. Ukukhiqizwa kokudla komuntu siqu nomphakathi (okuphambene nezitshalo ezinkulu ze-mono) kubalulekile ekulondolozeni i-biosphere yoMhlaba. Ngenxa yokuthi isakhiwo somhlaba ne-ecobrick siyindleko ephansi kakhulu, futhi inqubo ngezansi kulula kangaka, abafundi kanye namaqembu amasha angakwazi ukuphatha umsebenzi ogcwele – ekwenzeni i-ecobricks, ukuklama isikhala, ukuyiklama. Lokhu kudala umuzwa wokuziqhenya nobunikazi obunamandla kakhulu. I-pf enhle kakhulu, inqubo yomhlaba kanye ne-ecobrick ozothola iyakwazi ukuhlaziywa-lezi ziyisisekelo ezifanayo ezisetshenziselwa ukwakha izindlu nezakhiwo.
1. Ukuhlolwa kwenhlabathi
Isinyathelo sokuqala ukuhlola umhlaba ozowusebenzisa ekwakheni kwakho. Khetha nomhlaba ngobuningi bokuqukethwe ngobumba. Lokhu kusho ukuthi ihlanganisa ndawonye uma uyifinyelela. Yiqiniso, umhlaba uhlukile yonke indawo! Ngakho-ke, ukuqala sifuna ukuthola inhlanganisela engcono kakhulu yesihlabathi nobumba ukuze sisetshenziselwe ukwakhiwa kwakho konke. Ngomhlaba wakho okhethiwe, yenza amanye ama-pancake! Lokho ‘kulungile, hlanganisa encane inqwaba ye-cob enezilinganiso ezihlukahlukene zeshlabathi sakho sangasese nodaka (ungakhathazeki ngalesi sivumelwano). Yenza ama-pancake angaba ngu-3cm ngo-15cm. Zama imikhawulo ehlukene, njengesihlabathi esisodwa, izingxenye ezimbili zobumba. Faka ukuxuba kwemikhawulo ehlukene (okungu-1: 0, 0: 1, 1: 3, 1: 1, 3: 1) ebhodini. Vumela ukuba zome elangeni nasemvula. Emva kwezinsuku ezimbili noma ezintathu ubuyekeze ama-pancake akho. Khetha isilinganiso lokho kungaqhubeki kalula, noma okungazange kuvele. Uma usuthole isilinganiso esiqinile kakhulu, usulungele ukusebenzisa lokhu ngezinga elikhulu.
2. Setha indawo yokusebenza ephephile.
Uthole indawo yakho ekhethiwe? Sula isikhala lapho uzosebenza kuzo zonke izingozi. Qiniseka ukuthi kunenqwaba yesikhala samahhala sokusebenza nokuhambisa. Nika isikhala sokuxuba i-cob, ukufaka izinto zokwakha, kanye namathuluzi. Qinisekisa ukuthi azikho izingozi emhlabathini lapho uqala khona.
3. Hlela bese ubeka isisekelo sakho sokusungula
Yenza ukukhanya kwakho emhlabathini ukuze udwebe umthamo wokwakha kwakho. Lokhu kuzokusiza ukuthi ubone ukuthi i-curve nejamo kanye nokuthi mangaki ama-ecobricks ozodinga. Lungisa njengoba ubona kufanelekile.
Beka ama-ecobricks aphansi emhlabathini ukuze uhlele ukwakhiwa kwakho
4. Gcina isisekelo sakho
Uma usuvele uthola ibhentshi yakho, phakamisa ngezinti, bese ususa amabhodlela wakho okubhaliwe. Endaweni yabo bemba umsele 10 cm ejulile. Phakamisa umshini. Gcwalisa lo msele ngamatshe aphakathi nendawo
5. Beka isisekelo sesimiso
Hlanganisa ingxube embi yensimbi engxenyeni eyodwa yamakhementi: izingxenye ezingu-10 zesihlabathi / igravel. Sivame ukusebenzisa amabhodlela ethu aphukile ale nhlanganisela- siwaqede amabhodlela bese siwafaka njengengxenye yegridi / isihlabathi. Thela lokhu ngaphezulu kwamatshe. Vumela amamentimitha angu-5 we-samente ngaphezulu kwezingodo.
6. Faka i-Ecobricks phansi
Beka i-ecobricks (labo owayisebenzisela isisekelo sakho sokusungula) kukhonkolo. Qinisekisa ukuthi kuphela amaphesenti angama-75% ebhodlela ahlanganisiwe. Vumela usimende lume.
Lay ecobricks into soft cement.
Be sure not to cover with cement.
7. Mash umxube wakho we-cob
Hlanganisa i-cob yakho ku-isilinganiso otholile kwakuhamba phambili ku-Isinyathelo 1. Sebenzisa amabhakede ukuze ulinganise ingxenye ngayinye. Lahla amabhakede esihlabathi nesobumba phezu kwe-tarp enkulu. Engeza isixhumanisi sakho semvelo (utshani, utshani, i-coconut fiber, njll …). Sebenzisa izinyawo zakho ukuze uhlanganise bese uxuba i-cob. Engeza amancane amanzi amaningi lapho uhamba ukusiza ukuxuba (kodwa hhayi okuningi noma ukuxuba kwakho kuzoba mnandi kakhulu).
Chofoza ukuze wande.
8. Yenza i-Cob Balls
Uzokwazi ukuthi ingxube isiphelele uma ungasakwazi ukubona noma yisiphi isihlabathi futhi wonke u-batch unokuvumelana okufanayo. Yenza ithimba lakho lenze amabhola ngaphandle komxube- lokhu kuyisinyathelo sokugcina ekuxubeni nasekuhlanganiseni kwe-batch.
9. Beka ungqimba wesibili we-Ecobricks
Letha amabhola phezu kokwakhiwa. Zibange phansi ungqimba lwekhonkrit. Vala ngendwangu yesikhombi esihlanganisiwe cishe ku-5cm phezulu. Bese, beka umugqa wakho olandelayo wamabhodlela. Beka ibhodlela ngalinye phakathi kwamabili ngaphansi kwalo.
10. Faka ezinye izendlalelo zekhofu
Uma nje amabhodlela ahlunga emgqeni ophansi we-cob, gcwalisa noma yiziphi izikhala ezinkulu phakathi kwamabhodlela (okungukuthi ngama-curve) ngamatshe. Lokhu kuzosiza ingxube yakho ye-cob iyaqhubeka. Gcwalisa nge-cob phakathi kwamabhodlela. Engeza enye ingqimba ka-5cm ngaphezulu kwamabhodlela. Qhubeka ungeze izendlalelo zamabhodlela kanye ne-cob! Sithola ukuthi amabhentshi ayenamabhodlela amabili noma amathathu. Ngodonga, engeza umugqa wensimbi yensimbi kuzo zonke izingqimba zamabhodlela.
11. Faka isicelo sokugqoka
I-Skin Exterior: Kunezindlela eziningi zokunikeza noma ukumboza ingxube yakho ye-cob ukuze uqinise futhi amanzi aqine amandla.
Engeza usimende kwisilinganiso sakho se-cob ukuze kube ngu-20% wokuxuba. Hlanganisa ngendlela efanayo nangaphambili.
2. Faka isicelo kungqimba yangaphandle ye- Faka upende ngokudweba okucacile kwamanzi we-acrylic proofing.
3. Ukudweba ngezingqimba zomgodla omusha kuhlanganise nobumba obuhle ka-10%.
4. Faka upende phezu kwendwangu yokukhipha i-lime.
12. Ukuqedela phezulu ngesamente namatayela aphukile
Kumabhentshini uzofuna ukwengeza ungqimba lwesamente ukuhlala. Hlanganisa i-samente kumakhemikhali angu-1: izingxenye ezingu-6 zesihlabathi. Faka isicelo esincane ubuncane be-10 cm. Sebenzisa amathrekhi aphukile ukwenza iphethini ekhoneni lakho phezulu. Beka ibhodi elide kuqala ngaphambi kwephethini oyifunayo. Iphethini ilungile uma ubeka isamente phezulu ebhentshini. Ngenkathi isitimela sisesemanzi, cindezela amathayili aphukile engxenyeni eya emanzini. Uma usomile owomile, sebenzisa itrowel ukumboza ngendwangu yesimende esihle (mix 1: 4). Sebenzisa isiponji esimanzi ukuze usule njalo uhlanzekile.
Uma usuqedile … sitshale futhi ujabulele!
Qaphela! Ukusebenzisa isamente ukwakha nge-Ecobricks kungabangela izinkinga ezinkulu esikhathini esizayo. Uma isakhiwo sakho siphelile futhi kufanele sithuthelwe noma siphulwe phansi, isitimela sinamandla kuneplastiki ye-PET. Imfucumfucu yesimali izoqeda ama-Ecobricks! Lokhu kusho ukuthi umuntu esikhathini esizayo uzoba nomsakazo omkhulu wokuhlanza. Kungcono ukunciphisa ukusetshenziswa kwamakhemikhali nokwandisa ukusetshenziswa komkhumbi ku-Ecobrick. Ngale ndlela, ama-Ecobricks angasuswa ngokuphepha futhi asetshenziswe kabusha. Ngokuphindaphindiwe!
Ukusebenzisana Kunikwe amandla.
Izakhi zokwakha i-Ecobrick zikhishwa yimilingo yokubambisana. Imisebenzi izofuna amakhulu eminyaka. Mema futhi ugqugquzele wonke umuntu emphakathini ukuba adle embonweni wakho obomvu! Ngombono owodwa ocacile wesikhala esibanzi, wonke umzimba womfundi, abazali nabafundisi bangahlangana. Ngomunye umuntu ohambisa i-ecobricks eyodwa noma emibili uzobe ulungele ukwakha ngesikhathi. Njengoba kunezisebenzi zokuvolontiya eziningi ezishaya udaka, uzokwazi ukuzakha nesikhathi!